EmSculpt Factory |China EmSculpt Manufacturers and Suppliers
Protable 4 mitantana milina endrika emslimming
HIFEM fitaovana hozatra hatsaran-tarehy, izay mampiasa ny teknolojia avo lenta indrindra (HIFEM) mifantoka indrindra amin'ny vibration magnetika, dia manentana mivantana ny neurônina môtô, ka ny hozatry ny vatana dia mitohy mivelatra sy mihamitombo (Ity karazana contraction ity dia tsy azo atao amin'ny fanazaran-tena mahazatra na mety. Fanatanjahan-tena） Ny fikorianan'ny angovo mandritra ny 30 minitra dia afaka manentana ny fikorontanan'ny hozatra 30000 mahery, izay manampy ny sela matavy hametabolika sy hikorontana mafy.Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny fanamafisana ny hozatra, dia mitondra traikefa ara-teknolojia vaovao ho an'ny famolavolana vatana.
Ems body shaping sculpt System Emslim Machine Emt fatiantoka stimulator Body Slim muscle stimulation beauty machine
Mahomby indrindra amin'ny vodiny sy ny kibo, ny EM Slim dia mampiasa teknolojia an-tsaha Electro-Magnetic High-Intensity Focused mba hanentanana ny fipoahana fohy amin'ny fikorontanan'ny hozatra mahery vaika izay mitarika amin'ny fitomboan'ny hozatra, ny fihenan'ny volume, ny famaritana tsara kokoa ary ny feo mihatsara.
Ny EM Slim no hany fomba hanampiana ny vehivavy sy ny lehilahy hanorina hozatra sy handoro tavy ary fomba fiasa tsy manangana vodiny voalohany eran-tany.Miasa amin'ny alàlan'ny contractions supramaximal;ny hozatra sela dia voatery mampifanaraka amin`ny toe-javatra tafahoatra toy izany.Mamaly amin'ny fanavaozana lalina ny ao anatiny ny rafitra izay miteraka hozatra fananganana, tightening, toning sy fandoroana tavy.
Masinina Slimming Electro-Magnetic mifantoka amin'ny herin'aratra tsy misy invasive
Ity milina SLIMCULPT ity dia mampiasa teknolojia onjam-peo elektromagnetika mifantoka amin'ny herin'aratra, onja elektromagnetika mifantoka amin'ny angovo avo dia miditra amin'ny soson'ny hozatra 7cm, mandrisika ny neurônina môtô hozatra, miteraka fihenam-bidy tsy tapaka ny hozatry ny autologous, manao fanofanana mahery vaika, mba hahafahan'ny hozatra fanavaozana lalina. , izany hoe, ny fitomboan'ny myofibrils (fitomboan'ny hozatra) sy ny famokarana rojo collagen vaovao sy fibra hozatra (hyperplasia hozatra), ka mampiofana sy mampitombo ny hakitroky ny hozatra sy ny volume.
portable magnetic portable ems muscle stimulator fatiantoka matavy slimming
Ity fitsaboana ity dia afaka manatanjaka sy mampitombo ny hozatra ary mampihena ny tavy.Ny fitsaboana amin'ny fanatsarana ny endriky ny kibo sy ny andilana dia 30 minitra monja amin'ny fotoam-pitsaboana iray.Ny onja elektromagnetika dia miditra mivantana amin'ny sosona hozatra 7cm, izay mitovy amin'ny in-30.000 amin'ny fihenan'ny kibo.Ny zava-dehibe indrindra dia ny fanaintainana aotra, tsy misy fotoana fanamboarana, tsy misy taratra, ary tena azo antoka. Amin'ny ankapobeny, ny fitsaboana in-4 ao anatin'ny 2 herinandro dia afaka mahita vokatra tsara.
Emslim Salon Home Mampiasa Body Aesthetic Contouring Muscle Ems Slimming Machine
EMSlim Body slimming High Intensity Focused Electromagnetic (HIFEM) teknolojia ho an'ny fanalefahana ny vatana, fanamafisana ary fandoroana tavy.Fitaovana matihanina ho an'ny salon hatsaran-tarehy sy ny mpitsabo izay te-hanolotra ny mpanjifany ny fitsaboana ara-batana tsy misy invasive farany indrindra sy mahomby.
Ny EMSlim Body slimming dia manorina hozatra sy mandoro tavy amin'ny fotoana iray ihany.Ny pulses elektromagnetika dia miteraka hozatra supramaximal
contractions izay manery ny hozatra hozatra hifanaraka, mitarika ho amin'ny fitomboan'ny hozatra sy ny fandoroana tavy na dia lipolysis.
Masinina Manamboatra hozatra sy mandoro tavy
EMS Body Contouring High Intensity Focused Electro-Magnetic Technology (HIFEM) ho an'ny fanalefahana ny vatana, fanamafisana ary fandoroana menaka. Ny EMS Body Contouring dia manorina hozatra sy mandoro tavy amin'ny fotoana iray ihany.Ny pulses electromagnetika dia miteraka fikorontanan'ny hozatra supramaximal izay manery ny hozatry ny hozatra hifanaraka, mitarika amin'ny fitomboan'ny fitomboan'ny hozatra rehefa mandoro tavy na dia lipolysis.
Manamboatra hozatra & mandoro tavy milina ho an'ny vatana manify, manamafy ary mandoro tavy.Fitaovana matihanina ho an'ny salon hatsaran-tarehy sy mpitsabo izay te-hanolotra ny mpanjifany ny fitsaboana ara-batana tsy misy invasive farany indrindra sy mahomby. EMS Body Contouring dia manorina hozatra sy may matavy amin'izay fotoana izay.Ny pulses electromagnetika dia miteraka fikorontanan'ny hozatra supramaximal izay manery ny hozatry ny hozatra hifanaraka, mitarika amin'ny fitomboan'ny fitomboan'ny hozatra rehefa mandoro tavy na dia lipolysis.
Manangana hozatra & mandoro milina matavy
Portable manangana hozatra & mandoro tavy milina
2 Tantana na 4 Tantana ho an'ny safidy
Slim Beauty HI-EMT milina
Mampiasa High Intensity Focused Electro-Magnetic Technology (HIFEM) mba hanitarana sy hifehezana ny hozatry ny autologous ary hanao fanazaran-tena mahery vaika mba hamolavolana lalina ny firafitry ny hozatra, izany hoe ny fitomboan'ny fibrils hozatra (fanitarana hozatra) ary hamokatra rojo proteinina vaovao. ary ny fibra hozatra (hyperplasia hozatra), mba hampiofanana sy hampitombo ny hakitroky ny hozatra sy ny volume.
Ny fihenan'ny hozatra 100% mahery amin'ny teknolojia HI-EMT dia mety miteraka fanimbana matavy be dia be, Ny asidra matavy dia rava avy amin'ny triglyceride ary miangona ao amin'ny cellule matavy. dia esorina amin`ny alalan`ny metabolism ara-dalàna ny vatana ao anatin`ny herinandro vitsivitsy.Noho izany, slim hatsaran-tarehy milina dia afaka manatanjaka sy mampitombo hozatra, ary mampihena ny matavy amin'ny fotoana iray ihany.